द्रूतमार्गका लागि ८ अर्ब १५ करोड बजेट विनियोजन !! | सुदुरपश्चिम खबर
द्रूतमार्गका लागि ८ अर्ब १५ करोड बजेट विनियोजन !!
सरकारले काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग निर्माणका लागि अगामी वर्ष ८ अर्ब १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । शनिबार अध्यादेशमार्फत आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाली सेनामार्फत बनिरहेको आयोजनालाई लगानी अभाव हुन नदिने गरी बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
७२.५ किलोमिटर लामो द्रूतमार्गमा आगामी वर्षबाट तीन वटा सुरुङमार्ग पनि बनाउन थालिने छ । महादेव डाँडामा ३.३५५ किमी, धेद्रेमा १.६३० किमी र लेनडाँडामा १.४३० किमी गरी ६.४१५ किमि लामो सुरुङमार्ग बनाइने भएको छ ।
चार लेनको यो सडक बनेपछि निजगढबाट खोकनासम्म लगभग १ घन्टामा आइपुगिने अनुमान छ ।
चार वर्षभित्र काम सक्ने गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २१ वैशाख २०७४ मा द्रुतमार्गमा अहिलेसम्म १९ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । सुरुको म्याद गुजारिसकेको सेनाले अझै कति समय लगाउँछ भन्ने टुंगो छैन । (अनलाइनखबर बाट सभार)
स्वास्थ्यको बजेट १ खर्ब २२ अर्ब, खोपका लागि २६ अर्ब ७५ करोड